INHLANSI YETHEMBA NGOWESIFAZANE ODINGA ISIBINDI - Ilanga News
Home Izindaba INHLANSI YETHEMBA NGOWESIFAZANE ODINGA ISIBINDI
INHLANSI YETHEMBA NGOWESIFAZANE ODINGA ISIBINDI
emndenini kaNkz Sinenhlanhla Ngubane (22), (osesithombeni) ngemuva kokubizwa yisibhedlela esiseCape Town, iGroote Schuur, ukuba bazombheka ukuthi yini abangakwazi ukumlekelela ngayo ukuhlenga impilo yakhe. ILANGA libike ngeledlule ngodaba lwakhe, lokuhlaselwa yisifo esingajwayelekile esihlasela isibindi. Le ntokazi engeyokuzalwa eMpophomeni, eMngungundlovu, ithe ifisa ukuthi impilo yayo ibuyele esimeni. Lokho kuyokwenzeka uma ingakwazi ukuhlinzwa, ithole isibindi esisha okuzodla imali elinganiselwa kuR500 000.
Odabeni esabika ngalo, saveza ukuthi isibhedlela sithe singamsiza uNkz Ngubane uma ezokhokha le mali ngoba akasona isakhamuzi saseCape Town. Ngesikhathi ehlaselwa wukugula odokotela bathi basola ukuthi unejondisi (jaundice). Uthi kuze kwatholakala ukuthi unalesi sifo ngesikhathi elaliswe esibhedlela esizimele iMedi-Clinic, lapho athola ukuthi isibindi sakhe sinenkinga. Uthi wasizwa ngomunye udokotela owamxhumanisa nesibhedlela i-Groote Schuur, eCape Town, okuyisona esathola ukuthi unesifo esibizwa nge Auto Immune Hipatitis.
Lesi sifo basichaza bathi kunama-cells okuyiwo agcina esehlasela isibindi. ILANGA likhulume noNkz Ngubane, izolo ngoMsombuluko eseseCape Town esibhedlela iGroote Schuur, lapho ebehamba nomndeni wakhe. Uthe bakulesi sibhedlela ngemuva kokuba odokotela bakhona bethe makafike, babone ukuthi yini abangayenza ukuzama ukuhlenga impilo yakhe. Ube eseveza ukuthi ukujabulele kakhulu ukulekelelwa ngumasipala uMngeni oholwa ngumeya uMnu Chris Peppas, abakhokhele yena nomndeni wakhe amathikithi amabhanoyi ukuze bakwazi ukufika kulesi sibhedlela.
Unina kaNkz Ngubane, uNkk Ignatia Madolli Molefe, uthe ujabule kakhulu ngoxhaso asebelutholile ngendodakazi yakhe, wathi unethemba ukuthi kungekudala izoluthola uziso eludingayo. Uthi ukugula kwendodakazi yakhe kube nomthelela ekutheni aze alahlekelwe nawumsebenzi njengoba ethi ubelova emsebenzini ukuze ehle enyuka nayo ezibhedlela. “Siyabonga kakhulu kulabo abakwazi ukusilekelela ngoba njengoba kungasebenzi muntu nje emndenini, kasikwazi kwenza lutho. Lokhu kugula kwakhe, kudinga imali njengoba nemithi yakhona ibiza.
“Njengoba silapha nje eCape Town sinethemba lokuthi odokotela bazokwazi ukumlekelela kulokhu kuhlinzwa akudingayo,” kusho yena.UMnu Peppas ubhale ekhasini lakhe ku-Facebook, wathi njengomasipala bakhethe ukulekelela uNkz Ngubane ngemali yabakhokhi bentela ukuze akwazi ukuthola usizo aludingayo. “Lena yindlela yokusebenzisa imali yabakhokhi bentela ngendlela eyiyo,” kusho yena. UNkz Ngubane uveze ukuthi isilinganiselwa ku-R31 700 imali eseyingenile ngokweminikelo, kanti labo abafisa ukuphonsa esivivaneni bangamfakela ku-SS. Ngubane, Account no. 1642231507 noma baxhumane naye ku-066 0425 038.
Previous articleKabeneme ‘kudayiswa izindawo zomphakathi’
Next articleUbanjiswe wucingo “obulale” umlamu wakhe